"ဒီပျံသန်းနေတဲ့ cholitas" သည်၎င်းသည် iPhone XS စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပေါ်ရှိနောက်ဆုံးဗီဒီယို၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
နှစ်ပေါင်းများစွာ Cupertino မှယောက်ျားများသည်အသုံးပြုသူများကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုပေးခဲ့သည် iPhone ပေါ်မှာရိုက်ချက်ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကဗွီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ပြသထားတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကင်မရာနှင့်အနည်းငယ်မျှသောစိတ်ကူးဖြင့်လုပ်နိုင်သည်.
အနည်းငယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း, ပေါင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်များအတွက်အထူး applications များ။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏နောက်ဆုံးဗီဒီယို“ Las cholitas voladoras” သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြသသည် ဘိုလီးဗီးယားနပန်းအမျိုးသမီးအသင်းအဖွဲ့ဒီရဲဘော်အများစုနှင့်မတူသည့်ဗီဒီယိုမှာစပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။
Las Cholitas Voladoras သည်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၊ အဲလ်တိုတွင်အခြေစိုက်သောတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည်။ သူမ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးသမီးများအားသူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အနုပညာဖော်ပြခြင်းစသည်တို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အားပေးသည်။
ဤဗွီဒီယိုကို Lynn Bousquet မှတည်းဖြတ်ပြီး Jeremy Schneier မှထုတ်လုပ်သော Michael Johnson နှင့် Luisa Dörrမှဒါရိုက်တာနှင့်ဂီတကို Dana Buoy မှရိုက်ကူးထားသည်။ iPhone XS ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်တာဝန်ယူသူများသည် Brandon Kuzma နှင့် Bob Hoste တို့ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ရန် အောက်ပါစျေးကြီးဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုကြသည်:
Freefly Movi ရုပ်ရှင်ရုံစက်ရုပ်
ROV Mobile မော်တော်ဆိုင်ကယ် Slider
FiLMiC Pro ကို
Beastgrip မှန်ဘီလူး Adapter နှင့်ရေနံတူးစင်စနစ်
Canon EF ချုပ်မျက်ကပ်မှန်
iPhone ကင်ပိန်းရှိ Shot ရှိအခြားဗီဒီယိုများနှင့်မတူသည်မှာ Apple သည်ဗီဒီယို၏ Off Off ကိုမျှဝေလိုက်သည်အချက်အလက်တွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာဒီဗီဒီယိုအသစ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့် iPhone အသုံးပြုသူများကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုအသစ်ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့၊ စုဆောင်းထားသည့် iPhone XS ကိုသာမက၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်စက်ရုံကိုပါတွေ့နိုင်တယ်။ ။
ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက Apple ဟာဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထဲမှာဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုဝေမျှခဲ့တယ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံများကိုတင်ရန်ပြိုင်ပွဲကိုစီစဉ်ခြင်းအပြင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို XS » "ဒီပျံသန်းနေတဲ့ cholitas" ဟာ၎င်းသည် iPhone XS စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပေါ်ရှိနောက်ဆုံးဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်
ငါသူတို့ luchadoras ရှုပ်ထွေးပြီ = voladoras နှင့်အတူတိုက်ခိုက်ခြင်း = ပျံသို့မဟုတ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ပြုမိပါပြီထင်မြင်ရ။
လုံးဝ။ အတူတူမဟုတ်ဘူး .
jose Valle အားပြန်ပြောပါ
Pokémon GO သည် Apple Watch အတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်